မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ / ကားအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများပေးသွင်းသူ | 1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ
ပစ္စတင်လက်စွပ်, Liner, Gasket, အပြည့်အဝ gasket, အင်ဂျင်ဝက်ဝံ,
1D Auto Corporation သည်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှဆင်းသက်လာသည့်တောင်အာရှ Guang Zhou စီးတီးတွင်0င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းကုမ္ပဏီသည်ပစ္စတင်, လက်စွပ်များ, စသည်တို့
Toyota, Mitsubishi နှင့် ISUZU OEM ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တို့နှင့်ပူးပေါင်းသည့်တရုတ်၏ထိပ်တန်းသုံးဆယ့်သုံးစီးနှင့်ကွင်းချုပ်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
1. ခိုင်မာသောသုတေသန& Technique ကိုတီထွင်ခြင်း - အင်ဂျင် 1600 ကျော်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခု, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS Piston, PCS Piston လက်စွပ်။
2. စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ Bosch / Siemens စက်များ, ဂျပန် NPR နည်းပညာနှင့် 170 တွင်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002,
3. ကုန်တင်ထောက်ပံ့မှုအဆင်ပြေ& စျေးကွက်အချက်အလက်များနှင့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုလျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်ရန်အတွက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိစက်ရုံဂိုဒေါင်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စက်ရုံဂိုဒေါင်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကိုကားအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် 11 နှစ်ကျော်ကြာသည်။
အကယ်. စီမံကိန်းအတွက်သင့်တော်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်မရှာနိုင်ပါက Ash Light's Professional Castriending0န်ဆောင်မှုသည်သင်၏စံပြထုတ်ကုန်များကိုအချိန်နှင့်အမျှအချိန်နှင့်တပြေးညီသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းကိုမစွန့်လွှတ်ဘဲသင်၏စံပြထုတ်ကုန်များကိုရယူရန်ကူညီသည်။ Production Precision: ထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်အနုပညာနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖောက်သည်များအားရရှိနိုင်သောတိကျမှန်ကန်သောထုတ်ကုန်များကိုရရှိသည်။
1. စုံစမ်းရေးကော်မရှင် - သုံးစွဲသူများသည်လိုချင်သောပုံစံအချက်များ, စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ,
2. ဒီဇိုင်း - ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံးစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်များကိုသေချာစေရန်စီမံကိန်း၏အစီအစဉ်မှပါ0င်သည်။